fomba malagasy – Blaogin'i Voniary
Étiquette : fomba malagasy
Vondrona Izany KA MAlagasy -Mba hipaka hatrany amin’ny foto-pisainana, ny teny, ny atao ary ny fihetsika rehetra ny maha-Malagasy
Hanatanteraka lanonana fifampiarahabana 2019 ny Izany kA MAlagasy ny Sabotsy 16 Martsa ho avy izao, manomboka amin’ny 11 ora eny amin’ny Cafétéria ESCA Antanimena. Vondrona iray ao amin’ny Facebook manandratra ny maha-Malagasy ary ho feno dimy taona amin’ity taona ity no niforonany. Hetsika miavaka no ampanatenain’ny mpikarakara amin’ny fankalazana izany ary santatra am-bavarano ihany ity... Lire la Suite →
Famadihana : fomba Malagasy ahitana taratra ny fihavanana sy ny firaisankina
Rehefa avy nilona tao anatin’ny fikarakarana sy ny lanonana aho dia tsapako tokoa ireo soatoavina Malagasy roa lehibe fonosin’ny famadihana, izay ventesina ombieny ombieny, tsy inona izany fa ny FIHAVANANA sy FIRAISANKINA. Efa tao anatin’ny lesona tamin’ny taona fahasivy ihany izy io fa toa natao tsianjery fotsiny. Efa nanatrika famadihana ihany koa aho fony fahakely... Lire la Suite →
Fandaharana 6 mivoy ny maha-Malagasy amin’ny fahitalavitra
Fahiny, ny takariva amorom-patana no itantaran’ireo raiamandreny amin’ireo zanaka aman-jafiny ny tantaran-drazana sy ny angano ary ampitany ireo lovantsofina. Ankehitriny, ny televiziona no anisan’ireo vato namelan-kafatra mampahalala antsika ny soatoavina, ny tantara, ny fomba sy ireo singa maro maha-Malagasy antsika. Manasa anao ary hamantatra bebe kokoa sy hanaraka ireto fandaharana atolotry ny fahitalavitra Malagasy isan-karazany... Lire la Suite →
Mandaitra kokoa amin’ny Malagasy ny Dina
Izay no hevi-dehibe azo tsoahina tamin’ny voka-pikarohana nentin’Andriamatoa Edally Ranoelson Tovondrainy nahazoany ny mari-pahaizana “doctorat es droit”. Ny marina dia aleon’ny Malagasy mirona amin'ny fitsaram-bahoaka toy izay miandry ny fitsarana ara-panjakana izay tsy atokisany intsony noho ny kolikoly sy ny fanodikodinana ao ambadika ao. Ratsy foana ve ny fitsaram-bahoaka? Misy karazany roa ny fitsaram-bahoaka eto... Lire la Suite →
"Kambana mirahavavy no naterany. Voalaza fa mitondra ozona ny fiterahana kambana ka tsy afaka hitaiza antsika izy mivady" P 133 Ny olona manapa-kevitra ny tsy hanaraka izay didian’ny fiarahamonina dia mivonona hisedra ilay antsoina hoe “rom-boay: izay mahasahy, homana !”. Asakasak’izay mankahatra fomba fa izy no hizaka ny tsiny sy hivesaran’ny ozona ary hailiky ny... Lire la Suite →